Kmzmaps, iimephu ezibalabala zeGoogle Earth - Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2011 Google umhlaba / imephu
Kmzmaps yinkampani elungiselelwe ukuvelisa iimveliso zokuzoba kangangexesha elithile ngoku, utsalela ingqalelo ulwalathiso yanikwa umsebenzi wabo ngokwenza iimaphu ukuba lungaphengululwa Google Earth kunye zobu enomtsalane ukudlisa ixabiso lihle ngaphezulu nokusetyenziswa google Umhlaba eziklasini geography okanye cartography.
Iitheyithengi zithengwa ngoluhlu, kwaye zingagcinwa xa ziboniswe ngaphandle kokuzilayisha kwipaneli ecaleni.
Makhe sibone ezinye zeziphumo ze-kmzmaps
Le yingqokelela oluquka kwifomu kumda wesangqa kwiingcamba kwicandelo KML kwezopolitiko kunye imibala eyahlukileyo kwakunye kwigridi ezazisenzeka kunye esiqu, unxweme kunye nezinye iinkcukacha aneethowuni particularized kunye kwabaphambili abaphezulu phakathi kwabamnyama nabamhlophe.
Le ngedatha iGoogle Earth ayinikezeli ukukhuphela, kodwa yintoni efunwa rhoqo kwimiboniso, kuquka izinto ezinjenge:
Ezi zixeko ezibalulekileyo
Udidi lwamanzi olwandle
Iintaba okanye izinto ezibalulekileyo zendawo
Olu luhlu olubandakanya ububanzi kunye nobude kunye nokupakishwa kwesidanga esisodwa, kunye nobukhulu obuhlukeneyo kwi-5 nganye kubini kunye nobude. Eyona nto ibetha ngayo le miqolo kukuba kukho enye i-reticle efihliweyo phantsi komhlaba, ebonakala ngayo kuphela kwindawo ehlanganiswe nolwandle.
Kwezi, isiqabu bobume iboniswa kunye uphelelisiwe ibenomtsalane kakhulu nobumhlophe nokulungisa iyafana oko akubona esikolweni sethu atlasi, kodwa zonke ezi mephu libonisiweyo ukuya ubude elithile, ngoko into oyibona maleko eqhelekileyo Google Earth.
Olu luchungechunge olukhangayo, kwiinjongo zemfundo. Iquka zombini i-grayscale yeklasi kunye nabanye abaneempembelelo zobugcisa ezifana ne-watercolor, sepia, pastel, ekwahlukileyo okanye ngendlela yeglasi edayiweyo.
Akuninzi kakhulu, kodwa sinethemba lokuba njengoko kusetyenziswa iGoogle Earth sele ixela i-1000 izigidi zokulandwa, ii-atlases ze-cartographic ziza kuthengiswa phantsi kweefom ehambelana nalo mhlaba osetshintshile ezinye iindlela zokubona ihlabathi.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuba egeomates waba 100 abafundi
Post Next I-Microstation V8i - Indlela yokuqalisa ilayisenisiOkulandelayo "